· ကျန်းမာရေး ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမိတ်ဆက်လက်မှတ်
Study Area 1 Agri Business
လေ့လာရန်ၕရိယာ ၁ - စိုက်ပျိုးစီးပွားလုပ်ငန်း
ACM20117 - တိရိစ္ဆာန်လေ့လာရေးအတွက်လက်မှတ် II
ACM40418 - ကုသရေးသူနာပြုလက်မှတ် IV
ACMEQU202 - မြင်းများကိုလုံခြုံစွာကိုင်တွယ်ပါ
ACMEQU205 - မြင်း၏အသိပညာကိုအသုံးပြုပါ
ACMEQU208 - မြင်းများနှင့်အလုပ်လုပ်ရန်ကိုယ်ပိုင်ကျန်းမာရေးနှင့်ကြံ့ခိုင်မှုကိုစီမံပါ
ACMGAS202 အလုပ်ခွင်ဆက်သွယ်ရေးတွင်ပါ ၀ င်ပါ
ACMGAS207 တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်ရေးဌာနအတွက် reception ည့်ခံ ၀ န်ဆောင်မှုပေးပါ။
ACMGAS209 အဖော်တိရစ္ဆာန်များ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ပေးပါ
ACMGAS308 ဖောက်သည်များနှင့်အဖွဲ့ ၀ င်များနှင့်ထိရောက်စွာဆက်သွယ်ပါ။
ACMINF301 တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများ၌ကူးစက်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးမူဝါဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလိုက်နာပါ
ACMMIC401 ကြောင်နှင့်ခွေးများတွင် microchip ကိုထည့်သွင်းပါ
ခွေးနှင့်ကြောင်များအတွက် ACMSS00007 Microchip implants
ACMSUS201 သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောလုပ်ငန်းခွင်ကျင့်စဉ်များတွင်ပါ ၀ င်ပါ
ACMVET401 - တိရစ္ဆာန်ဆေးကုသရေး reception ည့်ခံတာဝန်များကိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သည်။
ACMVET402 - ပုံရိပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုအသုံးပြုပါ
ACMVET401 တိရစ္ဆာန်ဆေးကုသရေး reception ည့်ခံတာဝန်များကိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သည်။
ACMVET404 - လက်တွေ့ကျတဲ့ရုံးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊
ACMVET406 - သူနာပြုတိရိစ္ဆာန်များ
ACMVET413 မေ့ဆေးအဘို့ပြင်ဆင်နှင့်တိရိစ္ဆာန်မေ့ဆေးနှင့် analgesia စောင့်ကြည့်
ACMWHS201 အလုပ်ခွင်ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါ ၀ င်ပါ
ACMWHS301 လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါ ၀ င်သည်
ထုတ်လုပ်မှု Horticulture အတွက် AHC30616 လက်မှတ် III ကို
AHCCHM303 - ဓာတုပစ္စည်းများကို ပြင်ဆင်၍ အသုံးပြုပါ
AHCCHM304 - ဓာတုပစ္စည်းများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်သိမ်းဆည်းခြင်း
AHCCHM307 - ပိုးမွှားများ၊ ပေါင်းပင်များနှင့်ရောဂါများကိုထိန်းချုပ်ရန်ဓာတုပစ္စည်းများကို ပြင်ဆင်၍ အသုံးပြုပါ။
AHCDRG305 ရေနုတ်မြောင်းစနစ်များကို Install လုပ်ပါ
AHCIRG337 - ဆည်မြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကိုတိုင်းတာပါ
AHCMOM201 - စက်ဘီးနှစ်စီးစီးပါ
AHCMOM202 - လယ်ထွန်စက်ကိုလည်ပတ်ပါ
AHCMOM211 - ဘေးချင်းတွဲသုံးသောယာဉ်များဘေးချင်းယှဉ်ပါ
AHCMOM212 - စက်ဘီးစီးစက်ကိုသုံးပါ
AHCMOM216 - ဘေးချင်း တွဲ၍ လူသုံးယာဉ်များဘေးချင်းယှဉ်ပါ
AHCNAR307 မြေပုံများကိုဖတ်ပါ၊ ဘာသာပြန်ပါ
AHCNSY306 - ဝါဒဖြန့်မှုအစီအစဉ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ပါ
AHCPHT307 - ကုန်ကြမ်းများနှင့်ဆွေးမွေးမြူရေးပစ္စည်းများပြင်ဆင်ပါ
AHCPMG302 ထိန်းချုပ်စက်ရုံပိုးမွှားများ၊ ရောဂါများနှင့်ရောဂါများ
AHCWHS301 အလုပ်လုပ်ခြင်းကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါ ၀ င်သည်
AHCWOL301 စက်မှုလုပ်ငန်းဖော်ပြချက်များကို အသုံးပြု၍ သိုးမွှေးကိုအကဲဖြတ်ပါ
AHCWOL303 သိုးမွှေးကို ၄ င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများပေါ် မူတည်၍ ပြင်ဆင်ပါ။
AHCWOL403 - သိုးမွှေးရိတ်သိမ်းခြင်းနှင့်ကလစ်များပြင်ဆင်ခြင်းကိုစီစဉ်၊ အကောင်အထည်ဖော်ပါ
AHCWOL404 - အလုပ်ပုံမှန်လုပ်ရန်နှင့်သိုးမွေးရိတ်သိမ်းခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ခြင်း ၀ န်ထမ်းများကိုစီမံခြင်း
AHCWRK309 ပတ် ၀ န်းကျင်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောလုပ်ငန်းခွင်ကျင့်သုံးပါ။
ခွေးနှင့်ကြောင်များအတွက် ACMSS00007 Microchip implants ACMSUS201 သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောလုပ်ငန်းခွင်ကျင့်စဉ်များတွင်ပါ ၀ င်ပါ ACMVET202 နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များကိုလုပ်ဆောင်ပါ ACMVET401 - တိရစ္ဆာန်ဆေးကုသရေး reception ည့်ခံတာဝန်များကိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သည်။
ACMVET403 လက်တွေ့ရောဂါဗေဒလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလုပ်ဆောင်ပါ။ ACMVET404 - လက်တွေ့ကျတဲ့ရုံးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ ACMVET405 ခွဲစိတ်သူနာပြုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပါ။ ACMVET406 - သူနာပြုတိရိစ္ဆာန်များ
ACMVET407 ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသူနာပြုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလုပ်ဆောင်ပါ ACMVET408 တိရိစ္ဆာန်များအတွက်အာဟာရဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်နှင့်ပံ့ပိုးမှုပေးပါ။ ACMVET409 တိကျသောတိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်ပေးပါ ACMVET410 တိရစ္ဆာန်ဆေးကုသရေးသွားဘက်ဆိုင်ရာသူနာပြုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလုပ်ဆောင်ပါ။
ACMVET416 တိရစ္ဆာန်ဆေးကုသရေးဆေးဝါးများနှင့်အဆိပ်များပြင်ဆင်ခြင်းတွင်ကူညီသည် ACMWHS201 အလုပ်ခွင်ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါ ၀ င်ပါ
ACMWHS301 လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါ ၀ င်သည် ထုတ်လုပ်မှု Horticulture အတွက် AHC30616 လက်မှတ် III ကို AHCCHM201 ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိဓာတုပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုပါ AHCCHM303 - ဓာတုပစ္စည်းများကို ပြင်ဆင်၍ အသုံးပြုပါ
AHCCHM304 - ဓာတုပစ္စည်းများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်သိမ်းဆည်းခြင်း AHCCHM307 - ပိုးမွှားများ၊ ပေါင်းပင်များနှင့်ရောဂါများကိုထိန်းချုပ်ရန်ဓာတုပစ္စည်းများကို ပြင်ဆင်၍ အသုံးပြုပါ။
AHCIRG337 - ဆည်မြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကိုတိုင်းတာပါ AHCIRG338 ဆည်မြောင်းစနစ်များကိုရှာဖွေပါ
AHCIRG346 ဖိအားပေးသောဆည်မြောင်းစနစ်များကိုအသုံးပြုပါ AHCMOM201 - စက်ဘီးနှစ်စီးစီးပါ
အသားထုတ်လုပ်ငန်း (AMC30815 Certificate III) (လက်လီအရောင်းဆိုင်) ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိရိယာများကိုထိန်းသိမ်းပါ
AMPCOR202 - တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်နည်းများကိုသုံးပါ
AMPCOR203 အရည်အသွေးအာမခံချက်နှင့် HACCP လိုအပ်ချက်များကိုလိုက်နာပါ
AMPCOR204 လုံခြုံသောအလုပ်မူဝါဒများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလိုက်နာပါ AMPCOR205 လုပ်ငန်းခွင်၌ဆက်သွယ်ပါ
AMPR101 မျိုးစိတ်များနှင့်အသားဖြတ်ခြင်းများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ နောက်ထပ်အပြောင်းအလဲအတွက်
AMPR104 *, minced အသားများနှင့် minced အသားထုတ်ကုန်များကိုပြင်ဆင်ပါ
AMPR105 ဖောက်သည်များအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးပါ
AMPR106 လုပ်ငန်းစဉ်အရောင်းအရောင်းအ။ ပြုပြင်မွမ်းမံမှုသမိုင်း AMPR108 အသား၏အပူချိန်ကိုလက်ခံခြင်းမှရောင်းချခြင်းအထိစောင့်ကြည့်ပါ AMPR201 ဓါးဖြင့်ခုတ်ခြင်းဖြင့်ထုတ်ကုန်ကိုချိုးဖျက်ပါ။
AMPR203 ရောင်းချရန်အသားများကိုရွေးချယ်ပြီးချိန်။ ထုပ်ပိုးပါ လက်စွဲထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ AMPR204 ထုပ်ပိုးထုတ်ကုန်။
AMPR211 အသားလက်လီအရောင်းဆိုင်ရှိအစားအစာဖြေရှင်းနည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဥာဏ်များပေးပါ။
AMPR212 သန့်ရှင်းသောအသားလက်လီလုပ်ငန်းareaရိယာ။ ပြုပြင်မွမ်းမံမှုသမိုင်း AMPX209 ဓားများကိုထက်စေ
FBP30117 - အစားအစာထုတ်လုပ်မှုတွင်လက်မှတ် III ဝိုင်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု
FBP30918 လက်မှတ် III
FBPGRA3004 စက်ရုံလည်ပတ်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိန်းချုပ်သည် FBPOPR2069 အလုပ်ခွင်၌ကိန်းဂဏန်း application များကိုသုံးပါ FDFFS2001A - အစားအစာလုံခြုံမှုအစီအစဉ်နှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုအကောင်အထည်ဖော်ပါ
FDFFS3001A - အရည်အသွေးနှင့်စားနပ်ရိက္ခာလုံခြုံမှုအစီအစဉ်များအကောင်အထည်ဖော်မှုကိုစောင့်ကြည့်ပါ
FDFOP2061 ။ A. အလုပ်ခွင်၌ကိန်းဂဏန်းများကိုသုံးပါ
FDFOP2064, အလုပ်ခွင်သတင်းအချက်အလက်ပေးနှင့်လျှောက်ထား FDFOP3003A - ထုတ်လုပ်မှုစနစ်တွင်အပြန်အလှန်ဆက်နွယ်နေသောလုပ်ငန်းစဉ်များကို
FDFOP3004A - ထုပ်ပိုးမှုစနစ်တွင်အပြန်အလှန်ဆက်နွယ်နေသောလုပ်ငန်းစဉ်များကိုလုပ်ဆောင်ပါ
FWPHAR3223 - တစ်ခုတည်းဆုပ်ကိုင်ရိတ်သိမ်းဘို့ဘုတ်အဖွဲ့ကွန်ပျူတာစနစ်များကိုသုံးပါ FWPHAR3224 တွားစက်ကိုလည်ပတ်ပါ
MSMENV272 သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောအလုပ်တွင်ပါ ၀ င်ပါ MSMSUP303 - စက်ကိရိယာအမှားများကိုဖေါ်ထုတ်ပါ
RGR20218 - ပြိုင်ပွဲစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်လက်မှတ် II
RGRCMN203 ပြိုင်ကားစက်မှုလုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်နှင့်သမာဓိရှိခြင်းနှင့်အတူလိုက်နာပါ RGRPSH201 မြင်းပြိုင်ကွင်းများနှင့် trackwork တွင်ကိုင်တွယ်ပါ RGRPSH202 - မြင်းများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်ကူညီပေးပါ RGRPSH205 ပြိုင်ကားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်အခြေခံစီးနင်းခြင်းစွမ်းရည်ကိုလုပ်ဆောင်ပါ။ RGRPSH211 မြင်းပြိုင်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင်ထိရောက်စွာလုပ်ကိုင်ပါ။ RGRPSH301 တည်ငြိမ်သောစစ်ဆင်ရေးအကောင်အထည်ဖော်ရန်။ ပြုပြင်မွမ်းမံမှုသမိုင်း
RGRPSH303 မြင်းများသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုကြီးကြပ်ကွပ်ကဲပါ။ RGRPSH304 - ပြိုင်ပွဲအားကစားနှင့်ကြံ့ခိုင်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသောအချက်များကိုဖော်ထုတ်ပါ
RGRPSH308 - မြင်းများသို့မဟုတ်အခြားမြင်းများအတွက်ရှေး ဦး သူနာပြုနှင့်အရေးပေါ်ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုများကိုပေးပါ
RGRPSH309 - လမ်းညွှန်အောက်ရှိမြင်းစီးသူများအတွက်နို့တိုက်ကျွေးရေးအစီအစဉ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ပါ
SISXEMR001 - အရေးပေါ်အခြေအနေများကိုတုံ့ပြန်ပါ
ACM20117 - တိရိစ္ဆာန်လေ့လာရေးလက်မှတ် I
ACMGAS207 တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်ရေးဌာနအတွက်၀ န်ဆောင်မှုပေးပါ
ACMGAS209 အဖော်တိရစ္ဆာန်များ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀န်ဆောင်မှုများ အကြောင်း သတင်းအချက်အလက်ပေးပါ
ACMSUS201 သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောအလုပ်အလေ့အကျင့်တွင်ပါ ၀ င်ပါ
ACMVET401 - တိရစ္ဆာန်ဆေးကုသရေး ဧည့်ခံတာဝန်များ
ACMVET401 တိရစ္ဆာန်ဆေးကုသရေး ဧည့်ခံတာဝန်များကိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သည်။
ACMVET406 - တိရိစ္ဆာန်သူနာပြု
ACMVET413 မေ့ဆေးပြင်ဆင်နှဘို့င့်တိရိစ္ဆာန်မေ့ဆေးနှင့် analgesia စောင့်ကြည့်
ထုတ်လုပ်မှု Horticulture အတွက် AHC30616 လက်မှတ် III
AHCMOM216 - ဘေးချင်းတွဲသုံးသောယာဉ်များဘေးချင်းယှဉ်ပါ
AHCPHT307 - ကုန်ကြမ်းများနှင့်မွေးမြူရေးပစ္စည်းများပြင်ဆင်ပါ
AHCPMG302 စက်ရုံပိုးမွှားများ၊ ရောဂါများနှင့်ရောဂါများကိုထိန်းချုပ်သည်
Certificate in Wool Production
AHCWOL303 သိုးမွှေးကို ၄င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများပေါ် မူတည်၍ ပြင်ဆင်ပါ။
AHCWOL403 - သိုးမွှေးရိတ်သိမ်းခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ခြင်းကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါ၊ အကောင်အထည်ဖော်ပါ
AHCWRK401 အရည်အသွေးအာမခံချက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုအ ကောင်အထည် ဖော်ရန်နှင့်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန်။
အသားထုတ်လုပ်ငန်း (AMC30815 Certificate III) (လက်လီအရောင်းဆိုင်)
AMPR201 ဘန်းစတစ်ဖြင့် သုံး၍ ကုန်ပစ္စည်းကိုချိုးဖျက်ပါ
AMPR203 ရောင်းချရန်အသားများကိုရွေးချယ်ပြီးချိန် တွယ်ထုပ်ပိုးပါ
AMPR204 Package product using manual packing and labelling equipment.
AMPR204 လက်စွဲထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ ထုတ်ထုပ်ပိုးပါ။
AMPR211 အသားလက်လီအရောင်းဆိုင်ရှိအစားအစာဖြေရှင်းနည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဥာဏ်များပေးပါ
AMPR212 သန့်ရှင်းသောအသားလက်လီလုပ်ငန်းဧရိယာ။ ပြုပြင်မွမ်းမံမှုသမိုင်း
FBPOPR2069 အလုပ်ခွင်၌ကိန်းဂဏန်း application များကိုသုံးပါ
FDFFS2001A - အစားအစာလုံခြုံမှုအစီအစဉ်နှင့်လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများကို အကောင် အထည်ဖော်ပါ
FDFFS3001A - အရည်အသွေးနှင့်စားနပ်ရိက္ခာလုံခြုံမှုအစီအစဉ် များအကောင် အထည် ဖော်မှုကိုစောင့်ကြည့်ပါ
FDFOP3003A - ထုတ်လုပ်မှုစနစ်တွင်အပြန်အလှန် ဆက်နွယ်နေသော လုပ်ငန်းစဉ် များကိုလုပ်ဆောင်ပါ
FWPHAR3223 - တစ်ခုတည်းဆုပ်ကိုင်ရိတ်သိမ်းဘို့ကွန်ပျူတာစနစ်များကိုသုံးပါ
MSMSUP303 - စက်ကိရိယာအမှားများကိုဖေါ်ထုတ်ပါ
Certificate in Animal Transportation
RGRPSH202 - မြင်းများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်ကူညီပေးပါ
RGRPSH207 - Perform racing stable duties, Updated to meet Standards for Training
RGRPSH308 - Provide first aid and emergency care for horses or other equine
RGRPSH308 - မြင်းများအတွက်ရှေး ဦး သူနာပြုနှင့်အရေးပေါ်ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုများကိုပေးပါ
RGRPSH309 - လမ်းညွှန်အောက်ရှိပြိုင်မြင်းများအတွက်တိုက်ကျွေးရေးအစီအစဉ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ပါ
10581NAT - အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့်ရပ်ရွာနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာသင်တန်း
10582NAT - အလုပ်နှင့်လေ့ကျင့်ရေးအတွက်အဆင်သင့်အတွက်လက်မှတ် ၁ ။
10583NAT - အလုပ်နှင့်သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်လက်မှတ်
10585NAT - အလုပ်အကိုင်တိုးတက်မှုအတွက်လက်မှတ် III ကို
10586NAT - အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့်လေ့လာမှုလမ်းကြောင်းများတွင်လက်မှတ် III
10587NAT - လုပ်ငန်းနှင့်အလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ် IV
10725NAT - ကြိုတင်စကားပြောနှင့်ရေးသားထားသောအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း
၁၀၇၂ စကားပြောနှင့်ရေးသားအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် NAT လက်မှတ် II
၁၀၇၂ စကားပြောနှင့်ရေးသားအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် NAT Certificate III
10748NAT တက္ကသိုလ်ပြင်ဆင်မှုအတွက်လက်မှတ် IV
10767NAT ။ ပညာရေးဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အင်္ဂလိပ် IV လက်မှတ် IV
10768NAT: ပညာရေးဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အင်္ဂလိပ်စာလက်မှတ် IV
10769 နောက်ထပ်လေ့လာရန် Pathways အတွက် CERT III ကို
AHCMOM217 - စက်ဘီးစီးစက်ကိုအသုံးပြုပါ
AHCPGD301 - စက်ရုံတည်ထောင်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ပါ
AHCWOL304 - သိုးမွှေးသိုးမွှေးများကိုအတန်းအစားခွဲရန်ပြင်ဆင်ပါ။